Optic Fibre Ikhebula, Umthambo optic adaptha, Umthambo optic isixhumi, Umthambo optic Splitter - TTI
Kusukela yasungulwa, njengenhlangano isithekelisi, TTI kuyinto ezikhethekile emkhakheni wezezimboni, ukumaketha kanye R & D imikhiqizo zokuxhumana optical. Sihlose ngesivinini uhlelo Telecom inethiwekhi abathengi ezihlukahlukene OEM kanye zobuchwepheshe abasebenzisi kuphele.
Ukwaneliseka ikhasimende kuyinto siphishekela kwaphakade imigomo, babheke phambili ekusebenzeni nawe ukwakha brilliancy ndawonye.
Sine izinga okusezingeni futhi abanolwazi lobuchwepheshe ithimba nokuphathwa kwabasebenzi, ngubani ndawonye abasebenza kanzima ukwakha best brand ezinkampani ngokuqalisa ukusebenza njalo lokuphathwa kokwenziwa komsebenzi uhlelo, ukulungisa kanye nokwenza yenhlangano isakhiwo futhi ibhizinisi inqubo futhi kuthuthukise mncintiswano ikhono yenkampani.
1) Ukulwela for 100% isici khulula umkhiqizo
2) Ukuqinisekisa ngesikhathi ukudiliva
3) Ukwazi izidingo kanye okulindelwe amakhasimende ethu
4) Ethula ehola onqenqemeni lomkhiqizo
5) Ukwazi imithwalo yethu yemfanelo
Copyright © 2016 - 2022 ttifiber.com. Wonke Amalungelo Agodliwe.